Spain Site Train: Olee otú Iji ịzụta tiketi na ndị ọzọ | Save A Train
Home > Travel Europe > Spain Site Train: Olee otú Iji ịzụta tiketi na ndị ọzọ
(Emelitere ikpeazụ On: 27/08/2021)
Ọ bụrụ na ị nwere izu abụọ na-anọ na Spain, otu n'ime ụzọ kasị mma isi nweta gburugburu bụ inyocha Spain site Train. Ọ bụghị nanị na nke a ga-ekwe ka ị na-ahụ ụfọdụ ịrịba nlegharị anya gburugburu mba, ma ụgbọ okporo ígwè eme njem na Spain bụ nnọọ oru oma na mfe. The hardest akụkụ na-ịzụ gbaa ụgbọ okporo ígwè. The ụzọ kasị mma ịzụta gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ịga Spain site Train bụ online. E nwere ọtụtụ weebụsaịtị na-enye gị ohere ime nke a. Ihe dị mkpa bụ ịhụ nke na-arụ ọrụ kasị mma n'ihi na ị na okwu nke ala nke iji, asụsụ, na mmefu ego. Ịzụ gị tiketi n'oge na-enye ohere ị na- uru nke kwere omume pụrụ iche ọnụego nakwa dị ka na-eme ka n'aka na ị na-na na ụgbọ oloko na ị chọrọ tupu ha na-aghọ n'ụzọ zuru ezu gbaa akwụkwọ.
Mee atụmatụ ma tụọ tiketi gị n'ọdịnihu iji nweta ya kasị mma nke ụgbọ oloko gị njem. Were a lee anya na nke a izu abụọ njegasi maka njem na Spain site Train. Ka a na-a ndu n'ihi na gị ọzọ njem.
Mbụ anyị Spain site Train bụ Madrid (Days 1- 3)
Nke a bụ Spanish isi obodo na ọ bụ ezi mix nke ochie na ndị ọhụrụ, na mara ogige, ịrịba shopping, vibey nightlife na N'ezie Malasana ebe. Madrid bụkwa n'ụlọ ọtụtụ nke Spain si n'elu ngosi ihe mgbe ochie. Ọtụtụ ụlọ mba dị ọrụ. N'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ga-eme obodo a otú gị 3 ụbọchị ebe a ga-ọma-nọrọ. Ọ bụ ezi mmalite gị izu abụọ njem na mfe na a ụgbọ okporo ígwè na n'ebe ọ bụla si ebe a. Madrid Atocha bụ ọdụ ụgbọ oloko nke Renfe ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-aga, na kwa ọdụ ụgbọ okporo ígwè a bụ otu n'ime ihe ndị mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Spain.
San Sebastian (Days 3 - 5)
Nke a mara mma obere obodo bụ na Spain nke Basque Country na ziri ezi na Bay of Biscay. Ọ na-enye ma osimiri na ugwu nke na-niile uche n'oge ụbọchị, ma mgbe abalị na-abịa ọ bụ ihe niile banyere Old Town ebe ị ga-enwe ike inwe ọtụtụ ndị pintxo Ogwe maka delectable aru-size efere. Ị gaghị agbaghara otu mgbede ije tinyere Playa de la Concha agwụcha na pintxos na Old Town. Na-na San Sebastian na Spain site Train dị mfe dị ka e nwere dịkarịa ala anọ ụgbọ oloko si Madrid ụbọchị ọ bụla.
Pamplona (Days 5 – 6)
Obodo a bụ ebe obibi nke ndị controversial Na-agba ọsọ nke Bulls nke na -eme n'ọnwa Julaị n'afọ ọ bụla, ma na e nwere ọtụtụ ihe ka Pamplona karịa nke a. Ọ na-emi odude na n'elu ugwu na Navarre ógbè nke pụtara na e nwere ịrịba echiche nke ugwu na ndagwurugwu n'okpuru. The obodo bụ obere nke na-eme ka ọ dị mfe na-eje ije gburugburu na-na-ahụ mara mma ije na akụkọ ihe mere eme. Enwere ụlọ mmanya na ihe nkiri tapas n'afọ niile. Ị gaghị agbaghara a ije site na Old Town ma ọ bụ retracing ụzọ n'oge agba nke Bulls. N'ikpeazụ, obodo a bụ nwekwara mfe inweta site San Sebastian na a obere ụgbọ okporo ígwè pụọ.
Spain site Train – Barcelona Train (Days 6 - 9)
Obodo osimiri a kwesịrị ịbụ otu n'ime obodo ama ama na ama ama na Spain, na ọ na-adịghị ewute! Ma ị na-achọ nka na omenala, ije, umengwụ ụbọchị ke beach, oriri abalị niile, ma ọ bụ naanị ịgagharị obodo ọhụrụ, e nwere ihe maka onye ọ bụla na Barcelona. Ị gaghị agbaghara ndị Sagrada Familia, nke bụ otu n'ime ụwa nke oge a kasị dị ịrịba ama owuwu. Spain site Train awade Ugboro ụgbọ oloko si Pamplona na Barcelona na e nwere nanị a anọ-hour njem n'etiti obodo abụọ.
Valencia (Days 9 - 10)
Naanị a obere Spain site Train nọkwasi si Barcelona, Valencia na-na ọtụtụ ndị anaghị site njem nleta. Nke a obere obodo nwere ọtụtụ ihe na-enye ma ọ bụ nke ọma uru na-ewere na otu ụbọchị inyocha a bit. Ọ bụ a mara mma obodo na-eje ije site na nwere a ikpọ ọdọ na na-eje ije ụzọ ụkwụ. N'ihi na ndị na-achọ ihe ọzọ izuike e a dum nhọrọ nke osimiri na Albufera Park. Ị gaghị agbaghara a ije, na-agba ọsọ ma ọ bụ okirikiri site Turia Gardens – otu n'ime ndị kasị ibu mepere emepe ogige ntụrụndụ na Spain. E nwere ọtụtụ ụgbọ oloko na-agba ọsọ kwa ụbọchị site na Barcelona na Valencia.
Na ijikọta a Mediterranean obi na-adị na a omenala oge a art na mmepe bụ omume mgbe ejegharị ejegharị Spain site Train, Malaga nwere ike ịchọta na Spain n'ebe ndịda Costa del Sol. E weghachiri etiti obodo ahụ ọhụrụ wee jikọta ya Katidral Gothic na warawara okporo ụzọ ndị na -agafe agafe nwere oge a na Ogwe na hip ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Malaga nwere ụfọdụ n'ezie ịrịba osimiri ileta na sinik ugwu gbara ya gburugburu ya. Ị gaghị agbaghara rịa na Gibralfaro Castle maka echiche na-eku ume banyere ọdịda anyanwụ Andalus dị ebube na obodo. E nwere ụgbọ oloko na-agba ọsọ kwa ụbọchị site na Valencia ka Malaga.
Seville – Nke ikpeazụ anyị ndepụta nke Spain site Train
Seville bụ naanị a obere ụgbọ okporo ígwè si Malaga na dị nnọọ ka ikpọ. Chegodị echiche banyere Alaeze Ukwu Rom nweta ihe echiche nke na anya ma na-eche nke a obodo na-agwakọta ihe nke ọtụtụ akụkọ ihe mere eme oge. E nwere ọtụtụ ihe ime obodo, site ịgagharị obodo awagharị tinyere Arenal nkeji iri na ise osimiri na-eleta na fabulous ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ na-ekiri a ogu egbe na obodo si mere mgbanaka. Ị gaghị agbaghara a nleta Seville Katidral na Alcázar, nke ejiri mee ihe nkiri site na ihe nkiri TV a kụrụ Game of Thrones. Ụgbọ oloko na-agba ọsọ kwa ụbọchị site na Malaga na Seville na Seville azụ Madrid ebe mba ọdụ bụ.
Abụọ a na-izu njegasi ga-enyere gị ga-eme ka gị na njem na ịchọpụta Spain site Train. Anyị Atụmatụ na ntinye akwụkwọ gbaa ụgbọ okporo ígwè ga-eme ka ị na-enwe ike inwe ebe ị chọrọ ịga na na gị ezumike agba were were nke mere na i nwere ike onwe gị obi ụtọ. Ka emechara, na nke ahụ bụ ihe ememe bụ maka!
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ European Train Tickets, dị nnọọ pịa Ebe a na-aga na anyị website na-enwe na-agba ịnyịnya.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / es ka / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
ụgbọ oloko Train Travel Njem
Ịchụ Your Travel
Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ njem Russia